Ifowuni enokusongwa ye-LG eya kutyhilwa kwi-CES 2019 | I-Androidsis
Iimpawu ezahlukeneyo ze-Android ngoku zisebenza kwifowuni yabo yokuqala yokusonga, eya kuba yenye yeendlela zentengiso yonyaka olandelayo. Isamsung kunye neHuawei zezimbini zeempawu ebezisezindabeni kakhulu ngeemodeli zazo zokusonga. Kodwa i-LG iyasebenza kwifowuni yayo esongekayo, into enokwaziwa ngokubulela kumalungelo awodwa omenzi wechiza.
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo kwaqinisekiswa ukuba inkampani yaseKorea isebenza kule fowuni yokusonga eya kuthi isungulwe kwi-2019. Sele siyazi ukuba i-LG izakuzisa nini ngokusesikweni esi sixhobo sokuqala sokusonga. Kubonakala ngathi izakuhamba phambili kwabo sikhuphisana nabo.
Akuyi kufuneka silinde ixesha elide ukuze sazi ngokusemthethweni esi sixhobo, kuba izakubanjelwa eCES 2019 ezakubanjwa ngoJanuwari eLas Vegas xa le fowuni isongelayo ivela kwi-LG yaziswa. Ayisiyonto iqinisekiswe luphawu, kodwa iza kuthi enkosi kuEvan Blass.
Yenye yeefilitha ezaziwayo nezithembekileyo kule marike ye-Android, ukuze siluthathe nzulu olu lwazi. Ke kwiinyanga ezimbalwa ezizayo le fowuni iya kuziswa ngokusesikweni, enye yezona zilindeleke kakhulu kwimarike.
Ngale ndlela, Kubonakala ngathi ifemu yayiya kuba phambili kwabanye abakhuphisana nabo njengeSamsung kunye neHuawei Iifowuni zazo ziya kuthi zifike ngo-2019. Kubonakala ngathi i-Samsung yayiza kuboniswa kwi-MWC 2019, inyanga emva kokunikezelwa kwefowuni ye-LG. Nangona kungekho namnye kubo oya kuba ngowokuqala, kuba ifowuni yokuqala yokusonga ifike izolo.
Siyathemba ukuba i-LG iya kuwuqinisekisa lomhla wentetho kungekudala. Kwaye sinokwazi ngakumbi malunga nefowuni esongelayo kungekudala. Okucacileyo kukuba ukusonga ii-smartphones kuya kuba yenye yezona zinto zintsha ezinomdla kunye nomtsalane wentengiso ye-Android ye2019.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » LG » Ifowuni yokusonga ye-LG sele inomhla wentetho